Dawladda Hoose hal-abuur ayaan ka soo jeediyaa | Vaikuttajan reittikartta
Dawladda Hoose hal-abuur ayaan ka soo jeediyaa
Qof kasta raad ayuu ku yeelan karaa go’aamada laga sameeyo dowlada hoose ee degmada aad degan tahay adiga oo u soo jeediya halabuuro dowlada hoose. Qof kastaa oo degmada degan – oo aad adiga ku jirto – wuxuu xaq u leeyahay in uu soo jeedo hal-abuur u soo jeediyo mas’uuliyiinta dowlada hoose ee ku saabsan arrimaha quseeya dowlada hoose.
Dadka degan degmada waxay xaq u leeyihiin in ay ogaadaan sida hal-abuurada ay u hormareyso iyo hal-abuur kasta ee su’aal laga qabo dowlada hoose lagu dhameeyo. Hal-abuurada degmada waxay dhamaan dadka degmada ugu ogolaataa in ay si toos ah ay ugu qeyb qaataan go’aan ka gaarida socoto iyo sidoo kale inta u dhaxeyso doorashooyinka.
Faahfaahinta sida aad ula xiriiri la’hayd degmooyinka waxaad ka heli kartaa bogga internetka ee Mas’uuliyiinta Gobol iyo tan Degmo ee Urrurada Finnish (Kuntaliitto). Bogga interka ee www.aloitekanava.fi wuxuu dadka da’da yar siiyaa jid sahlan ee lagu abuuro hal-abuurada iyo talo-siin sida loo sameyn la’haa siinaya. Bogga internetka wuxuu kuu ogolaaneyaa in fekradaada u gudbiso dadka kale, aad ka faalooto fekradaha kuwa kale oo hal-abuuradana aad taageerto.